Home SOUTH AMERICA FOOTBALL CORRADA Ciyaartoyda Kubadda Cagta ee Brazil Sheekada Carruurnimada Gabriel Martinelli Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeed ee Untold
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada dhamaystiran ee kubadda cagta ee ugu caansan oo loo yaqaan 'nickname'Nelli". Sheekadeena Jibriil Martinelli Xilliga Taariikhda Untold Biography Xaqiiqooyinka ayaa kuu keenaya xisaab buuxa oo ah dhacdooyin caan ah laga soo bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda.
Noloshii iyo Kacitaanka Gabriel Martinelli. Ku mahadsanid Arsenal, FootballLondon iyo TheSun
Haa, qof walba wuu ogyahay inuu yahay mid ka mid ah da 'yarta ugu dhaqsaha badan ee ka imanaya Brazil waqtiyadii ugu dambeeyay. Si kastaba ha noqotee, in yar ayaa tixgelinaya taariikh nololeedka Gabriel Martinelli kaas oo aad u xiiso badan. Hadda bilaa camal dheeraad ah, aan bilawno.
Sheekada Carruurnimada Gabriel Martinelli Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeed ee Untold - Hore iyo Taariikhda Qoyska
Laga bilaabo, Magacyadiisa oo buuxa waa Gabriel Teodoro Martinelli Silva. Gabriel Martinelli sida loogu yaqaan badanaa wuxuu ku dhashay maalinta 18th ee Juun 2001 hooyadiis, (magaca qoyska: Silva) iyo aabaha, Joao Martinelli Guarulhos, São Paulo, Brazil. Ka hel hoosta waa sawir waaliddiinta Gabriel Martinelli oo laga yaabo inay ku jiraan bartamihii-50's waqtiga qorista.
La kulan Gabriel Martinelli Waaliddiinta-- Mr iyo Mrs Joao Martinelli. Amaahda IG
Gabriel Martinelli wuxuu asalkiisu ka soo jeedaa Guarulhos. Tani waa degmo Brazil ah iyo magaalada labaad ee ugu dadka badan gobolka Brazil Sao Paulo. Ma ogeyd?… Wuxuu sidoo kale asal ahaan ka soo jeedaa qoyskiisa oo ka yimid dalka Talyaaniga aabihiis Joao Martinelli.
Xiddigo badan oo kubada cagta ah oo ku nool Brazil waligood kuma noolaan nolol sharaf leh ka hor intaanay gaarin stardom halka Gabriel Martinelli uusan ka duwanaan jirin maadaama uu ka yimid qoys burburay ama qoys sabool ah. Sida ciyaartoy kubada cagta qaarkood (jecel yihiin) Roberto Fermino iyo Gabriel Ciise), waxaa loo baray halganka waddooyinka xitaa ka hor intaanu si sax ah ugu dhawaaqin magaciisa. Qoyska Gabriel Martinelli ayaa deggenaa mid ka mid ah meelaha ugu saboolsan ee Guarulhos, oo ah qayb ka mid ah magaalada oo lagu amaano kaliya soo saarista carruurta leh hibooyinka gudaha kubada cagta. Gabriel Martinelli wuxuu bilaabay kubbadda cagta markii uu yaraa.
Sheekada Carruurnimada Gabriel Martinelli Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeed ee Untold - Dhismaha Waxbarashada iyo Xirfadaha Shaqada
Markii uu ahaa cunug, Gabriel Martinelli wax dan ah kama uusan helin waxbarashadiisa wuxuuna kaliya ku riyaaqay kubbadda cagta. Iyagoo ka baqaya in tartanka ciyaarta kubada cagta uu ahaa mid aad u weyn iyada oo dhowr ka mid ah ay ka dhigayeen meesha ugu sareysa, waaliddiinta Gabriel Martinelli waxay ku qasbanaadeen inay raadsadaan ikhtiyaar ah in wiilkooda uu ku helo waxoogaa waxbarasho rasmi ah xagga umeerinta guriga.
Gabriel Martinelli waxbarashadiisa wuxuu ku bilaabay Futsal. Sida oo kale Philippe Coutinho isaga ka hor, Martinelli kontoroolka dhow iyo cagaha deg degga wuxuu ka dhashay ciyaar futsal. Xilliyadii dambe, beeraha maxalliga ah ee Guarulhos waxay u noqdeen dheri dhalaalaya dhalinyarada da 'yarta ah oo isu yimaada fiid kasta si ay ubad ciyaaraan.
Meelaha maxalliga ah ee Guarulhos- Halka ay Kubadda cagta ka billowday Gabriel Martinelli. Astaanta Sawirka: TheSun
Gabriel Martinelli goor hore wuxuu lahaa barakooyinka waalidkiis oo ah markii waqtigu sii socday, wuxuu caddeeyaa shakigooda, wuxuu ogaa inuu leeyahay hibo oo uu wax uun ka sameyn karo kubada cagta. Markii uu ahaa nin dhallinyar ah, Martinelli wuxuu bartay ganacsiga Futsal sidii weerar adag, oo isdaba-joog ah.
Sheekada Carruurnimada Gabriel Martinelli Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeed ee Untold - Nolosha Mudnaanta Hore
Laga bilaabo da'da sagaalka sano, prodigy-yadii dhalinyarada ahayd waxaa loogu yeeray by Kooxda Corinthians ee wakhtigeedii dhamaaday oo isaga ku casuumay dacwadaha. Martinelli wuxuu ku guuleystey wadnaha macalinkiisa inta maxkamad la saaray, oo ah muuqaal uu ku arkay inuu ku biirey kooxda. Martinelli si dhakhso leh ayuu fikrad uga helay kooxda Futsal ee Corinthians. Ma ogeyd?… Wuxuu dhaliyay goolal 66 ee Qeybta Gaarka ah ee Magaalo Weyn iyo himilooyin kale oo 56 ah oo ah taxanaha Dahabiga Gobolka - isaga oo hadafyadiisa ka dhiganaya waqtigan 122 wadarta.
Gabriel Martinelli Nolosha Hore ee Futsal. Ka tagista ciyaarta oo leh Yoolalka 142. Dhibcaha: TowerHamlets
Laga soo bilaabo 2012, kubad ku ciyaarista garoomada oo aan Futsal aheyn mudnaantiisa. Kahor inta uusan ka tagin Futsal ee kubbadda cagta, Martinelli wuxuu dhaliyay waqti dheeri ah oo ah '20 times' oo ka dhigaya yoolalka goosha-142. Isagoo kubada cagta garoonka ku jira, Martinelli wuxuu dhaliyay goolasha 63. Waqtiga lagu gaarayo yoolalka 202 ee Korintos, waa la caareeyay oo waa loo yeedhay markaas Kooxda heerka afaraad ee reer Brazil Ituano FC sanadka 2015.
Intii uu ku sugnaa Ituano FC, Gabriel Martinelli wuxuu sii waday inuu soo jiito macalinkiisa iyo taageerayaasheeda. Ma ogeyd?... Sababtoo ah wuxuu ahaa nin fiican, da 'yarta da' yar ee sawirka hoose ku jira, wuxuu jebiyey rikoorkii isagoo noqday ciyaaryahankii ugu yaraa ee si rasmi ah ugu soo biiro Ituano, waana muuqaal taageerayaasha ay ogaadeen inuu runtii yahay xiddig sameynta.
Nolosha Xannaaneynta Hore ee Gabriel Martinelli. Sawirka Sawirka: Kubadda cagta
Sheekada Carruurnimada Gabriel Martinelli Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeed ee Untold - Waddada loogu talagalay sheekada
Tan iyo markii ugu horreysay, Martinelli wuxuu sii waday muujinta ballanqaad badan da'da yar, kaasoo soo jiitay kooxda reer Yurub ee ciyaarta (Man Utd, Barcelona, ​​Real Madrid). Ma ogeyd? Dhamaan kooxaha reer yurub, waxay ahayd Manchester United oo markii ugu horeysay tijaabisay isaga, oo ku casuumay tijaabooyin. Intii lagu jiray tijaabooyinka, Gabriel Martinelli wuxuu ku ciyaaray isla koox dhalinyaro ah sidii Mason Greenwood. Nasiib darrose, Manchester United ayaa diidey inkasta oo ay haysatay afar tijaabo oo ay ku soo jiidato. Kahor intaadan ka tagin Manchester si aad u hesho daaq cagaaran meelo kale, Paul Pogba la kulmay Brazil ee la diiday. Erayadii Martinelli;
“Muuqaalkayga awgood darteed, Pogba wuxuu ogaa inaan ahay nin reer Brazil ah. Wuxuu weydiiyay haddii wax walba ay hagaagsan yihiin aniga iyo meesha aan ka ciyaarayo. Waan u sheegay wax walba oo dhacay ka dib, wuxuu ii ogolaaday inaan sawir la galo. Waxa kale oo uu ii ilaalin jiray wakhtigeyga halkaas)
Gabriel Martinelli waxaa ilaalin jiray Paul Pogba inta lagu guda jiray maalmihii tijaabada ahaa ee United. Dhibcaha: TheSun
Kadib tijaabo la aanta Manchester United, Barcelona kaliya waxay go’aansatay inay u ogolaato Gabriel Martinelli inuu ku tababarto akadeemigooda caanka ah ee La Masia ee kale si uu u daawado ka hor inta uusan go’aansanin inuu la soo saxiixdo.
“Tababarkayga aan la qaatay Mas Mas wuxuu ahaa mid ka mid ah qibradeyda ugu fiican ee aan ku soo qaatay kubada cagta. Ka sokow ahaanshaha mid ka mid ah jaamacadaha adduunka ugu waaweyn, heerka tababarka aad ayuu u sarreeyaa waxayna iga dhigtay inaan ku koraan wax badan kubada cagta.Martinelli mar buu yiri.
Sheekada Carruurnimada Gabriel Martinelli Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeed ee Untold - Kusoo sharax sheekada
Si uu u sameeyo magac weyn oo xushmad badan naftiisa, Gabriel Martinelli wuxuu go'aansaday inuu ku laabto Brazil, isagoo sii wataya naadigiisa Ituano FC. Fursaddaas loo baahnaa in magac loo yeelo ayaa timid markii loo xushay inuu kaqeyb galo tartankii caanka ahaa ee São Paulo State Championship.
Ma ogeyd?… Gabriel Martinelli wuxuu bilaabay inuu sii fiicnaado maadaama uu heystay bandhigii ugu fiicnaa tartanka. Wuxuu ka caawiyay hagida Ituano FC inay ku guuleysato wareega group-yada isla markaana ay gaarto wareega 8da dhamaantiin Thanks to himilooyinkiisa cajiibka ah.
Gabriel Martinelli Rise oo loo yaqaan Fame- Halkan, wuxuu u dabaaldegayaa gool ka dib tartankii Sao Paulo. Amaah ku socota FootballLondon
Waxqabadka Gabriel Martinelli wuxuu ka helay boos aad u jecel xerada tababarka xulka qaranka Brazil ee pre-Copa América bishii May 2019. Waa maxay tan macnaheedu?. Waxay la macno tahay in loo xushay inuu tababar la qaato kuwa jecel Neymar, Coutinho inta soo hartayna ciyaartoydii hore ee reer Brazil.
Sidookale, kaqeybgalka Campeonato Paulista AKA Paulistão (Horyaalka heerka sare ee xirfadleyda kubada cagta ee gobolka Brazil ee São Paulo) wuxuu noqday meel kale oo loo weecdo mustaqbalkiisa yar. Ma ogeyd?… Ka dib markii daaqa la siiyay, Gabriel Martinelli wuxuu qabtay 3 abaalmarino caan ah oo Paulistão abaalmarino horyaalka ah oo kala ah: (Campeonato Paulista Xiddiga Cusub ee ugu Fiican, Laacibiinta Xiddigaha Waddanka iyo Kooxda Sannadka ama 2019).
Wadada Gabriel Martinelli ee Sheekada Caanka ah- Abaalmarinta Ciyaaraha ee Paulista 2019. Ku ammaano Twitter
In kasta oo uu aad u yaraa, Martinelli magac ayuu naftiisa ku dhex yeeshay waddankiisa hooyo. Kaliya abaalmarinta, wuxuu noqday mawduuc xiisaha aan ka yarayn naadiyada ugu sarreeya ee 25 ee adduunka oo bilaabay inuu dalbado saxeexiisa. Kooxda oo dhan, waxay ahayd Arsenal oo markii ugu horraysay isku dayay inay ka soo baxaan rabitaankeeda. In kasta oo uu aaday kooxda Arsenal, da’yarta yar waxay heshay fursad ay kula kulanto qaar ka mid ah geesiyaasheeda.
"Waxaa laygu soo dhoweeyay sida ugu wanaagsan ee suuragalka ah. Markii aan aad u yaraa, waxaan yara yara xishooday. Waxaan arkay ciyaartoy aan fursad ugu helay oo keliya inaan ka daawado telefishanka iyo PlayStation. Dhammaantood si wanaagsan bay ii soo dhoweeyeen oo i dareensiisay inaan guriga joogoWaxa uu intaas raaciyay ka dib markii uu ku soo biiray Arsenal.
Gabriel Martinelli wuxuu qaaday talaabooyinkiisii ​​ugu horreeyay ee ahaa sidii loo fulin lahaa kartidiisa isagoo laba jeer shabaqa soo taabtay kulankii Nottingham Forest. Kadib halyeeygiisii ​​Carabao Cup, wuxuu sidoo kale dhaliyay labo gool 4-0 joogtada ah ee Standard Liege ee Europa League. Hoos ka eeg qayb caddeymaha fiidiyowga ah (Sirta ah ee AFCVN Official).
Run ahaantii, waxaa jira himilo gooldhaliye ah inkasta oo uu sannadihii yaraa ahaa. Shaki la'aan, taageerayaasha Arsenal waxaa laga yaabaa inay qarka u saaran inay arkaan da ’yar u ifaysa xariifnimo heer caalami ah oo indhaha ku heysa. Inta soo hartay, waxaan dhihi karnaa, hadda waa taariikh.
Sheekada Carruurnimada Gabriel Martinelli Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeed ee Untold - Nolosha Xiriirka
Kordhintiisa caannimada iyo imaatinka London, waa hubaal in qaar badan oo ka mid ah taageerayaasha Arsenal iyo taageerayaasha Brazil ay qasab ku noqotay inay la yaabaan haddii Gabriel Martinelli uu leeyahay gabar saaxiib ah. Runtu waxay tahay; mar hore ayaa la qabtay. iyo wixii ka dambeeyay kubbadda cagta guuleystey, waxaa jira gabar saaxiibad ah oo qurux badan oo magaca ku baxda Rachel Akemy.
La kulan Gabriel Martinelli's Gabadha - Rachel Akemy. Amaahda IG
Si aan caadi aheyn bil kadib markii uu ku soo biiray Arsenal, Gabriel Martinelli wuxuu qaaday talaabooyin geesinimo leh isagoo u heellan inuu guursado (ku mashquusho) saaxiibtiisa. Tani waxay ahayd qaab la mid ah oo uu qaaday sanamkiisii Philippe Coutinho oo ku guursaday oo guursaday saaxiibtiis isagoo aad u da 'yar.
Labaduba Rachel Akemy iyo Gabriel Martinelli waligood kama lumin fursad ay sawirro ugu soo qaadaan iyagoo booqanaya meelaha durugsan. Buundada London Tower Bridge waa oka mid ah labada aqal ee ay dadku jecel yihiin inta lagu jiro xilliga firaaqada.
Gabriel Martinelli iyo Gabadha saaxiibka la ah ee Bridge Bridge ee London. Amaahda IG
Go’aaminta habka ay labadooda ugu socdaan xiriirkooda, waxay umuuqataa guur inay noqon karto talaabada xigta ee talaabadii hore.
Sheekada Carruurnimada Gabriel Martinelli Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeed ee Untold - Naftaada Shaqsiga
Inaad barato Gabriel Martinelli Nolosha Shaqsiyadeed waxay kaa caawineysaa inaad ka hesho sawir wanaagsan shakhsiyadiisa.
Xaqiiqooyinka Nolosha Qofka ee Gabriel Martinelli. Ku amaanto barta Instagram
Bilaabidda, Gabriel Martinelli waa dagaalyahan. Waa qof ku nool nolol go’aamiya oo go’aan qaadasho leh inkasta oo uu deggan yahay muuqaal qabow. Isaga oo ka hadlaya muuqaalka, Martinelli dhab ahaantii wuxuu u muuqdaa mid ka sii da 'weyn dhammaantiisna wuxuu u mahadnaqayaa geesinimadiisa iyo kartidiisa la qabsiga waxa nolosha u keenaya.
Martinelli oo ah 18 waqtiga qoraalku aad buu u jecel yahay noloshiisa jacaylka. Waligiis kama baqayo inuu xiriir la yeesho saaxiibtiisa bulshada sida ay u jecel yihiin ciyaartoy kale oo da 'yarta ah oo da' yar. Runtii tani waa astaan ​​lagu garto kalsoonidiisa iyo geesinimadiisa.
Sheekada Carruurnimada Gabriel Martinelli Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeed ee Untold - Nolosha Qoyska
Martinelli oo Noqday Noloshiisa Nololeed ee Qoyskiisa go'aankiisa ayaa khalkhal geliyay dariiqa qoyskiisa ee ku aadan madaxbanaanida dhaqaalaha dhamaantiin kubada cagta. Lahaanshaha xubin qoyska ah oo guuleysata oo ka dhigtay kubada cagta ayaa ka dhigtay qof kasta oo gurigiisa ku dhow oo ku dhawaad ​​ciyaarta kubada cagta.
Muuqaalka hoose ee fiidiyowga, qoyskiisa Gabriel Martinelli oo ay ku jiraan walaalkiis (qaraabadiisa) walaalkiis, adeerkiis iyo adeerkiis dhamaantood waxay ku damaashaadayaan gurigooda yar kadib markii ay daawadeen isaga oo gool dhalinaya kulankiisii ​​ugu horreeyay ee Arsenal. Amaah TheSun.
Ku saabsan Gabriel Martinelli Aabaha: Joao Martinelli waa nin reer Brazil ah oo xidid Talyaani ah isagoo u mahadcelinaya Martinelli ayeeyayaal. Tani waxay xaq u siineysaa wiilkiisa Gabriel Martinelli inuu helo Baasaboor Talyaani ah iyo sidoo kale inuu xaqiijiyo booskii uu mustaqbal ku lahaan lahaa xulka qaranka Italy. Sida hoos ku xusan, waxaa jira muuqaal muuqda oo u dhexeeya aabaha iyo wiilka.
La kulan Gabriel Martinelli aabihiis. Ku amaanto barta Instagram
Ku saabsan Gabriel Martinelli hooyadiis: Wax yar baa laga ogyahay. Si kastaba ha noqotee, waxaa la ogyahay inay ku dhalisay magaca 'Silva' ka hor intaanay guursanin ninkeeda Joao. Isagoo ka duulaya fiidiyowga kore, waxay umuuqataa Gabriel Martinelli hooyadeed waqtiga qorista wali waxay ku nooshahay Brazil inteeda kale qoyska Martinelli.
La kulan Gabriel Martinelli hooyadiis. Ku amaanto barta Instagram
Sheekada Carruurnimada Gabriel Martinelli Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeed ee Untold - LifeStyle
Waxay waydiisaa fahanka noloshiisa gaarka ah, inaad ogaato nolosha Gabriel Martinelli garoonka dhexdiisa waxay kaa caawin doontaa inaad hesho sawir buuxa oo shaqsiyadiisa ah.
Thanks to barbaarintiisa, Gabriel Martinelli wuxuu leeyahay aasaas adag oo ku saabsan ku haynta dhaqaalihiisa iyo inuu habeeyo. Sida wakhtigii qoritaanka, ma jiraan wax calaamado ah oo Martinelli oo ku nool qaab nololeed qurxoon oo si fudud looga arki karo baabur aad u qaali ah iyo guryo waaweyn.
Xaqiiqooyinka Nolosha ee Gabriel Martinelli- Waa La Sharaxay. Dhibcaha GlobeFreak iyo Instagram
Awooda Martinelli ee ah inuu siiyo kaaliye dhaqaale xubnaha qoyskiisa ayaa la mid ah balanqaadka uu garoonka ku sameeyo.
Sheekada Carruurnimada Gabriel Martinelli Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeed ee Untold - Xaqiiqooyin aan sax ahayn
Diinta: Gabriel Martinelli wuxuu ka soo barbaaray guri diineed oo masiixi ah, isagoo ka qeyb galaya Wadaadada caanka ah ee Roman Catholic ee Guarulhos intii uu yaraa. Isagu ma qariyo inuu Ilaah ku mahadnaqo inta lagu guda jiro dabaaldegyada himilooyinkiisa.
Weeraradii 911 wuxuu dhacay sanadka uu dhashay: Ma ogeyd?… Kaliya 3% dadka isticmaala internetka ayaa ka helay macluumaadka ku saabsan weeraradii 9 / 11 webka. Si sax ah Sebtember 11 2001, laba diyaaradood oo Mareykan ah oo la afduubay ayaa ku qulqulay munaaradaha mataanaha ee Xarunta Ganacsiga Dunida ee New York kuwaas oo si isdaba joog ah u dumay.
Musiibo Dhulgariir ayaa dhacay sanadka uu dhashay: Sidookale wadada musiibo, dhulgariir duurjoogta ah oo lagu qiyaaso 7.9 oo ah qiyaasta 'Richer' ee jigted Gujarat ee India bishii Janaayo 26, oo ay ku dhinteen ugu yaraan 20,000 dad ah kuna dhaawacay 167,000 kale.
Teknolojiyadaha muhiimka ah ayaa la sii daayey sanadka uu dhashay: Bishii Janaayo 13, 2001, Wikipedia.org waxay ku timid khadka tooska ah. Bishii Luulyo 2001, Google waxay soo saartay "Raadin Sawir" caan ah oo ay u siisay dadka isticmaala inay galaan wax ka badan Muuqaalo 250 milyan. Ugu dambeyntiina, Noofambar 15, Microsoft ayaa sii deysay qalabka ciyaarta ee loo yaqaan 'Xbox video console'.
Hantida FACT: Waad ku mahadsan tahay akhriskayaga Taariikhda Dhalashada ee Gabriel Martinelli oo lagu daray Xaqiiqda Untold Biography. Ugu LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxnimada iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan sax ahayn, fadlan nala wadaag adigoo faallo ka bixinaya hoos. Had iyo jeer waanu qiimeynna oo ixtiraamnaa fikradahaaga.
Bernd Leno Sheeko dhalasho sheeko dheeri ah Xogta loo yaqaan 'Biography'